Maitiro ekugadzirisa iwo ma icon uye majeti eIOS 14 | IPhone nhau
Maitiro Ekugadzirisa iOS 14 Icons uye Widgets
Nekusvika kweIOS 14 takave nenhau zhinji, dzimwe dziri nani kupfuura dzimwe, semuenzaniso kudzikira kuri kuita bhatiri kuri kukanganisa vashandisi vazhinji, kunyanya avo vane zvishandiso zvekare senge iPhone X. Zvisinei hazvo, hazvisi zvinhu zvese inhau dzakaipa mumazuva achangopfuura ne kusvika kweIOS 14.
Zvitsva zvabuda, izvozvi zvinokwanisika kugadzirisa zvidhori uye kugadzira ako Widgets muIOS 14 nenzira iri nyore yaungafungidzira, tsvaga nesu kuti ungazviita sei. Semazuva ese, kuActualidad iPhone isu tinokudzidzisa iwe nzira iri nyore kwazvo yekuwana zvakanakisa kubva kune yako iPhone kana iPad.
1 Gadzirisa mifananidzo
2 Gadzirisa Widgets ako kune yakazara
Nzira yekugadzirisa zvidhori ndiyo yakapusa yaungafungidzira. Ini ndinogara ndichikurudzira kuti iwe utarise mavhidhiyo anofambidzana neaya ma totorales kuitira kuti zvive nyore kwauri kuti uteedzere nhanho dzese dzinoitarisa ichirarama, zvisinei, tinogona kugara tichikusiya pano mukunyora zvakanakisa ruzivo. Zvatichaita zviri nyore kushandisa pfungwa, uye nekuda kweizvi isu tinoda imwe yeanokumbira iyo Cupertino kambani yakapa rudo rukuru, tiri kutaura nezvePfupi.
Tichaita nhanho dzinotevera dziri nyore, asi chinhu chekutanga ndechekuti isu tinosarudza kana kusevha mune yedu gallery iyo pikicha kana icon iyo yatichazoda kushandisa gare gare seyakagadzirirwa icon. Kune izvi tinogona kuzviita isu pachedu kuburikidza nePhotoShop kana chishandiso chatinoona chakakodzera, kana sezvazvinoonekwa mune yedu vhidhiyo-dzidziso, kurodha pasi zvakananga kuburikidza neGoogle Mifananidzo, ndinosiya izvo kune zvaunofarira, asi zvichengete zviri nyore muPikicha gallery ye iPhone yako yemberi. Iye zvino tave kungoenda kune iyo Shortcuts application uye ita zvinotevera zvinotevera:
Dhinda bhatani "+" kuti uwedzere nzira pfupi
Tinosarudza sarudzo «Chinyorwa»
Isu tinosarudza sarudzo "Vhura app ..."
Iye zvino mu «Sarudza» tinodzvanya uye sarudza chishandiso chatiri kuda kuvhura
Kana tangosarudzwa tinodzvanya bhatani «…» muchikamu chepamusoro kurudyi
Tinosarudza «Ratidza pane Kumba Screen» uye tinya pamufananidzo icon
Iye zvino tinosarudza iyo foto uye ndokuigovera
Takagadzirira, isu tatozvigadzira yedu pfupi nzira yekuteedzera chiratidzo chekushandisa. Ini pachangu, harisi basa randinofarira zvakanyanya nekuti rinogadzira diki "lag" pakati pekudzvanya pane icon uye zvinotora nguva yakareba sei kuvhura application, asi Zvinoita kunge zvave kuita chaiko kuitika ne # iOS14HomeScreen saka tinokuratidza zvakadaro.
Gadzirisa Widgets ako kune yakazara
Rutsva rwechipiri nderwechokwadi mukana wekugadzira nekugadzirisa edu Widgets, uye nekuda kweizvi ticha shandisa chishandiso chakatangwa muApple App uye kuti iwe unofanirwa kurodha pasi nekukurumidza sezvazvinogona. Tiri kutaura nezve Widgetsmith, Anwendung iyo mune dzidziso yakasununguka zvachose kunyange iine zvikwereti zvakabatanidzwa. Zvimwe zvese nhoroondo, kana iko kuiswa kwavepo isu tinokwanisa kuona kuti isu tine matatu Widgets sarudzo dzetsika yechinyakare iyo Apple yakaitisa yayo yega system.
Kamwe iko kuiswa kwacho, tinokwanisa kupinda uye kusarudza saizi chaiyo yeiyo Widget. Tikapinda tinokwanisa kugadzirisa kubva kunobva pasi kusvika pasi nezviri kuratidzwa neWidget. Zviripachena kuti parizvino zvakaganhurirwa kune rumwe ruzivo nezve mamiriro ekunze, uye imwe tsananguro ndeyekuti inongoratidzira zvirimo muChirungu, asi zvirokwazvo ichavandudzwa munguva pfupi kuratidza zvimwe zvirimo zvakasiyana uye mune mimwe mitauro. Parizvino, zvimwe zvezvimiro zvaro zvakabhadharwa uye zvimwe zvakasununguka zvachose, isu tichafanirwa kushanda pazviri.
Zvichakadaro ,joinha dambudziko, enda kuTwitter uye neiyo hashtag # iOS14HomeScreen, quote @A_iPhone (yedu Twitter account) uye utiratidze izvo zvisikwa zvako nezvishandiso zvitsva izvi. Iwe unogona zvakare kujoina yedu Teregiramu chiteshi (LINK) uye tiratidze kuti zvakafamba sei.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iOS » iOS 14 » Maitiro Ekugadzirisa iOS 14 Icons uye Widgets
Aya ndiwo 217 matsva Emojis anosvika gore rinouya
Apple TV inokunda Emmy yayo yekutanga ne 'The Morning Show' mutambi Billy Crudup